အားနပ်စ် ရူသာဖို့ဒ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(အားနက်စ် ရူသာဖို့ဒ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အားနပ်စ် ရူသာဖို့ဒ် (အင်္ဂလိပ်: Ernest Rutherford) (30 August 1871 – 19 October 1937) သည် နယူးဇီလန် သိပ္ပံပညာရှင် ဖြစ်ပြီး သူ့အလုပ်ဖြစ်သော နျူကလီးယား ရူပဗေဒ နှင့် အက်တမ် ဖွဲ့စည်းပုံ သီအိုရီ အတွက် ၁၉၀၈ ခုနှစ် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘဲယ်ဆုကို ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
၁၉၂၅ – ၁၉၃၀
(1871-08-30)၃၀ ဩဂုတ်၊ ၁၈၇၁
ဘရိုဒ်ဝါးတား၊ တပ်စ်မန်တိုင်းဒေသ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ။
၁၉ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၃၇(1937-10-19) (အသက် ၆၆)
ကိန်းဘရိုတ်၊ အင်္ဂလန်၊ ယူကေ။
ရူပဗေဒ နှင့် ဓာတုဗေဒ
အယ်လ်ဖာအမှုန်နှင့် ဘီတာအမှုန်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု
အက်တော့မစ် နယူကလိယပ်နှင့် ရုသားဖို့ဒ်မော်ဒယ်အား တွေ့ရှိမှု
Rumford Medal (၁၉၀၄)
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆု (၁၉၀၈)
Barnard Medal (၁၉၁၀)
Elliott Cresson Medal (၁၉၁၀)
Matteucci Medal (၁၉၁၃)
Copley Medal (၁၉၂၂)
Franklin Medal (၁၉၂၄)
Albert Medal (၁၉၂၈)
Wilhelm Exner Medal (၁၉၃၆)
ရူသာဖို့ဒ်သည် ပထမဆုံးသော နျူကလီယား ရူပဗေဒ သုတေသီ ဖြစ်သည်။ သူသည် အယ်လ်ဖာ၊ ဘီတာနှင့် ဂမ်မာဟုခေါ်သော ရေဒီယိုသတ္တိကြွခြင်း အပိုင်း သုံးခုကို ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အယ်လ်ဖာအမှုန်များသည် ဟီလီယမ် နျူကလီအိုင် ဖြစ်သည်ကိုလည်း ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သူ၏ ဂိုင်ဂါ−မားစ်ဒမ် စမ်းသပ်မှု ကြောင့် ယနေ့သိရှိနေကြသော နျူကလီးယပ်စ်နှင့် အီလက်ထရွန် တို့ ပေါင်းစပ်ထားသော အက်တမ် ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင်၊ ရူသာဖို့ဒ် သည် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးသော အယောင်ပြ နျူကလီးယား ပေါင်းစပ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်မှ နိုက်ထရိုဂျင် ဓာတ်ငွေ့ ကို အောက်ဆီဂျင် ဓာတ်ငွေ့ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရူသာဖို့ဒ် သည် ကဗမ်းဒစ်ရှ် (Cavendish) ဓာတ်ခွဲခန်း ကို ဦးဆောင်သူဖြစ်သည်။ ပရိုတွန် နှင့် နျူထရွန် ပေါင်းစပ်ထားသော နျူကလီးယပ်စ် တည်ရှိကြောင်းကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင် ထိုကဗမ်းဒစ်ရှ် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ဂျိမ်းစ် ချဒွစ် ပြုလုပ်သော စမ်းသပ်မှုသည် ရူသာဖို့ဒ် မှန်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ နယူးဇီလန် အုတ်ကလန်ရှိ ရူသာဖို့ဒ် ကောလိပ်ကို သူ့ကို ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဗြိတိသျှလူမျိုး ရူပဗေဒပညာကျော်အား နက်ရားသားဖို့ သည် ၁၈၇၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့တွင် နယူးဇီလန် နိုင်ငံ၌ ဖွားမြင်၍ ထိုနိုင်ငံ၌ပင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနောက် ကိမ်းဗရစ်သို့ ၁၈၉၄ ခုနှစ်တွင် ရောက်လာပြီးလျှင်၊ ဂျေ၊ ဂျေ၊ သွန်မဆင်နှင့် နှစ်နှစ်တိုင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ အလုပ် လုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ကနေဒါနိုင်ငံ မွန်းထရီးအောမြို့ရှိ မဂ္ဂီး တက္ကသိုလ်တွင် ရူပဗေဒပါမောက္ခရာထူးကို ရရှိခဲ့လေသည်။
ထိုတက္ကသိုလ်၌ ဖရ်ကဒရစ်ဆော့ဒီးနှင့်တွေ့၍ အတူတူ မကြာ ခဏ အလုပ်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြရာတွင် ရေဒီယိုသတ္တိရှိသော ဒြပ်စင်တို့၏ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အဆက်အသွယ်ရှိပုံကို စုံစမ်းကြလေသည်။ ထိုသို့စုံစမ်းခဲ့သောကြောင့် အက်တမ်ထဲတွင် စွမ်းအင် အမြောက်အမြား ရှိမည်ဟု ရားသားဖို့ ထင်မြင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ်၌ ရူပဗေဒပါမောက္ခအဖြစ် နှင့် လေးနှစ် တိုင်တိုင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် အက်တမ်ခန္ဓာအိမ် ဆောက်တည်ပုံအဆိုကို ထုတ်ဖော် ကျေညာခဲ့လေသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ဒြဗ်၏ခန္ဓာအိမ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ် သဘော သက်ဝင်လျက်ရှိသည်ကို ပြခဲ့လေသည်။ ၁၉၁၉ ခုနှစ် တွင် ကိမ်းဗရစ်တက္ကသိုလ်က ဗင်းဒစ်ဓာတ်စမ်းဌာန၌ ရူပဗေဒ ဆိုင်ရာ လက်တွေ့ စမ်းသပ်မှု ပါမောက္ခအဖြစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် လေသည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်နေစဉ် ဒြဗ်စင်တို့၏ သဘာဝ ပြောင်းလဲမှုကို အချိန်များစွာ အကုန်ခံ၍ လက်တွေ့နည်းဖြင့် ပြုလုပ်ကြည့်လေသည်။ ဤသို့ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ခဲ့ရာမှ အက်တမ်၏နျူကလိယတ်၌ အက်တမ်မှာကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးသော ခန္ဓာအိမ်ရှိသည်ဟု ထင်မြင် ယူဆခဲ့လေသည်။ ရားသားဖို့သည် ၁၉ဝ၈ ခုနှစ်တွင် ဓာတုဗေဒပညာရပ်အတွက် နိုဘယ်ဆုကို ရခဲ့ပြီး နောက်၊ ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် ဆာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် အော်ဒါအော့မဲရစ်ဘွဲ့ထူးဖြင့် ချီးမြှင့်ခြင်းကို ခံရပြီးနောက် ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင် လော့ဘွဲ့ထူးဖြင့် တိုးတက်ချီးမြှင့်ခြင်းကို ခံရပြန်သည်။
ရားသားဖို့သည် ကမ္ဘာကျော် ရူပဗေဒပညာကျော်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သောအခါ သိပ္ပံပညာလောကကြီးတွင် ဆုံးရှုံးခြင်းကြီး တစ်ရပ် ဖြစ်ရလေသည်။ ရေဒီယမ်ရောင်ခြည်တို့ကို သတ္တုချကြည့်သော သုတေသန လုပ်ငန်းများကြောင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ကမ္ဘာကျော် သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတစ်ဦး ဖြစ်လာရလေသည်။ ထို့ပြင် အက်တမ်၏ နျူကလိယတ် ဆောက်တည်ပုံနှင့် ဒြဗ်တို့၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်သဘော သက်ဝင်ပုံတို့ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြ နိုင်သောကြောင့်လည်း အထူးကျော်ကြားခဲ့လေသည်။
↑ Ernest Rutherford – Biography။ NobelPrize.org။ 12 November 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 February 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ernest Rutherford, Baron Rutherford of Nelson။ Encyclopædia Britannica။
↑ The Discovery of Radioactivity။ lbl.gov (9 August 2000)။
↑ Campbell၊ John။ Rutherford – A Brief Biography။ Rutherford.org.nz။4March 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "XXIV.Spectrum of the radium emanation" (1908). Philosophical Magazine Series616 (92): 313. doi:10.1080/14786440808636511.
Wikimedia Commons တွင် Ernest Rutherford နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Ernest Rutherford Archived 23 July 2008 at the Wayback Machine. @ nobel.se
"Ernest Rutherford 1871 - 1937". A Science Odyesy, pbs.org.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အားနပ်စ်_ရူသာဖို့ဒ်&oldid=706276" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။